အရုပျမလေးနဲ့တူအောငျလို့ ခှဲစိတျပွုပွငျမှုပေါငျး အကွိမျ ၁၀၀ ကြျောပွုလုပျခဲ့ရတယျဆိုတဲ့ အသကျ ၁၅ နှဈအရှယျ နာမညျကွီး Influencer မိနျးကလေး – Myanmar
ကမ်ဘာပျေါမှာ အရုပျမလေးနဲ့တူတဲ့ မိနျးကလေးပေါငျးမြားစှာကို လူတှမွေငျဖူးကွမှာပါ ။ အခြို.ကတော့ အဝတျအစားလောကျပဲ အရုပျမလေးနဲ့တူအောငျ ဝတျစားဆငျယငျကွပမေယျ့ အခြို.ကတော့ အဲ့လို မဟုတျပါဘူး။
China Post သတငျးစာရဲ. သတငျးတဈပုဒျအရ တရုတျပွညျက အငျတာနကျနာမညျကြျောLittle Z Nana အမညျရှိ အသကျ ၁၅ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးဟာ သူမကိုယျသူမ အရုပျမလေးနဲ့တူအောငျ တရုတျငှေ တဈသနျး(မွနျမာငှေ သိနျး ၂ ထောငျ) ခနျ့ အကုနျအကခြံပွီး အကွိမျပေါငျး တဈရာကြျော ခှဲစိတျပွုပွငျမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
သူမက သူမရဲ.ဘယျနရောတှကေို ဘယျလို ခှဲစိတျပွုပွငျခဲ့တယျဆိုတာကို အသေးစိတျလညျး ပွောပွထားပါတယျ။ ဒီလို ခှဲစိတျမှုတှပွေုလုပျတာကွောငျ့ သူမဟာ ကြောငျးတကျရကျတဈခြို.ကိုလညျး ပကျြခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။
သူမရဲ. အခုလို ခှဲစိတျပွုပွငျမှုတှကေို လူအမြားက ဝဖေနျခဲ့ကွတာနဲ့ ပတျသတျပွီး သူမက သူမအနနေဲ့ ဂရု မစိုကျကွောငျးနဲ့ အခုလို ခှဲစိတျပွုပွငျမှုကွောငျ့ ရရှိလာတဲ့ အလှတရားကို သူမအနနေဲ့ နှဈသကျသလို ယုံကွညျမှုလညျး ရှိကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။
အရုပ်မလေးနဲ့တူအောင်လို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုပေါင်း အကြိမ် ၁၀၀ ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် နာမည်ကြီး Influencer မိန်းကလေး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရုပ်မလေးနဲ့တူတဲ့ မိန်းကလေးပေါင်းများစွာကို လူတွေမြင်ဖူးကြမှာပါ ။ အချို.ကတော့ အ၀တ်အစားလောက်ပဲ အရုပ်မလေးနဲ့တူအောင် ၀တ်စားဆင်ယင်ကြပေမယ့် အချို.ကတော့ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး။
China Post သတင်းစာရဲ. သတင်းတစ်ပုဒ်အရ တရုတ်ပြည်က အင်တာနက်နာမည်ကျော်Little Z Nana အမည်ရှိ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ သူမကိုယ်သူမ အရုပ်မလေးနဲ့တူအောင် တရုတ်ငွေ တစ်သန်း(မြန်မာငွေ သိန်း ၂ ထောင်) ခန့် အကုန်အကျခံပြီး အကြိမ်ပေါင်း တစ်ရာကျော် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမက သူမရဲ.ဘယ်နေရာတွေကို ဘယ်လို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်လည်း ပြောပြထားပါတယ်။ ဒီလို ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့် သူမဟာ ကျောင်းတက်ရက်တစ်ချို.ကိုလည်း ပျက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမရဲ. အခုလို ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကို လူအများက ဝေဖန်ခဲ့ကြတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမက သူမအနေနဲ့ ဂရု မစိုက်ကြောင်းနဲ့ အခုလို ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုကြောင့် ရရှိလာတဲ့ အလှတရားကို သူမအနေနဲ့ နှစ်သက်သလို ယုံကြည်မှုလည်း ရှိကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဓါးပွတိုကျဖို. သနေတျမထုတျခငျ Hand Gel နဲ့ လကျအရငျဆေးခဲ့တဲ့ ဓါးပွမြား(ရုပျသံ)